Maraykanka, 01 April 2014
Mareykanka ayaa sheegay in is-casilaadda danjiraha ka fadhiyey India, Nancy Powell aanay wax lug ah ku lahayn wax xiisad ah oo labada dal ka dhexeeya oo ku saabsan xiriirka mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha mucaaradka.
Xiisado Cusub oo u Dhexeeya Labada Kuuriya
Waqooyiga Kuuriya ayaa hubka culus ku riddey biyaha Koonfuurta Kuuriya, talaabadaas oo u muuqatey mid looga jawaabayo dhoolatus milateri oo wadajir ay u sameynayaan Mareykanka iyo Koonfuurta Kuuriya.
Obama oo la Kulmay Boqorka Sacuudiga
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa kulan la qaatay boqorka Sacuudiga Boqor Abdallah Bin Abdulaziz, iyago ka dooday sida wax looga qaban karo khilaafka labadooda dal ee ka dhashey danaha nabadgelyaha ee gobolka.
IMF oo Deyn Siineysa Ukraine
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay talaabada Hay’adda Lacagta Dunida ee IMF ay deyn gaareysa 18 bilyan oo dollar ku siineyso Ukraine ay tahay mid muhiim ah.
Kerry oo la Kulmay Madaxweynaha Falastiiniyiinta
Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta kulan qeyb ka ah dadaalka nabadda bariga Dhexe wuxuu la qaatay Madaxweynaha maamulka Falastiin Mahmoud Abbas.
Obama oo ka Hadley Arrinta Ukraine
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in beesha caalamka ay ka mideysan tahay go’doominta Ruushka, taas oo ay ugu wacan tahay duulaankii Moscow ay ku qabsatey gobolka Crimea ee Ukraine.
Washington: 24 qof oo ku dhintay Dhul Go' ay
Gobalka Washington ee dalkan Maraykanka ayaa waxa ka dhacay dhul-go' bur -bur wayn geeystay, inta la ogsoon yahayna waxaa ku dhintay 24 qof in ka badan 170 tana waa la layahay.
Ruushka oo si KMG ah looga Saaray G8
Madaxweynaha Maraykank iyo dalalka dunida ugu dhaqaalaha roon ayaa iyaga oo doonaya inay go’doomiyaan dalka Ruushka Isniintii shalay xili aan la xadidin u hakiyey xubinimadii xukuumadda Moscow ee ururka G8.
USA oo Gacan ka Geysaneysa Baadigoobka Kony
Mareykanka ayaa labanlaabaya tirada ciidamadiisa gaarka ah ee uu dirayo inay ka qeyb qaataan ugaarsiga lagu hayo hoggaamiyaha dagaal ee reer Uganda, Joseph Kony.
Maraykanka oo Cunaqabateyn Saaray Ruushka
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa amray in la xayiro hantida toddobo sarkaal oo Ruush ah. Obama ayaa sheegay in talaabadan loo qaadayo kaalintii ay toddobo sarkaal ku lahaayeen aftidii uu Ruushku taageersanaa ee gobolka Crimea uu kaga go’ayey dalka Ukraine.
Maraykanka oo Abaalmarin Dul Dhigay 3 ka Tirsan Shabaab
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa abaal marin gaadhaysa 3 milyan oo doolaar ugu yaboohday ciddii keenta macluumaad horseedda in la soo qabto maxkamadna la hor keeno 3 nin oo ka tirsan al Shabaab.
Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay taageersan tahay howlgallada wadajirka ah ee ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay al-Shabab uga xorreynayaan magaallooyinka ku yaalla Koofurta Soomaaliya.